Edhomu anozvikudza achadzikiswa pasi (1-9)
Kurwiswa kwakaitwa Jakobho naEdhomu (10-14)
Zuva raJehovha rekurwisa marudzi ese (15, 16)
Imba yaJakobho ichadzokera kunyika yayo (17-21)
Edhomu achapiswa naJakobho (18)
Umambo huchava hwaJehovha (21)
1 Izvi ndizvo zvakaonekwa naObhadhiya:* Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha pamusoro paEdhomu:+ “Pane shoko ratanzwa kuna Jehovha,Pane nhume yatumwa kumarudzi kuti inoti: ‘Simukai, ngatigadzirirei kumurwisa.’”+ 2 “Inzwa! Ndaita kuti usave chinhu pakati pemarudzi;Uri kuzvidzwa chaizvo.+ 3 Wanyengerwa nemwoyo wako unozvikudza,+Iwe anogara mumikaha yedombo,Iwe anogara pakakwirira, uchiti nechemumwoyo,‘Ndiani angandiburutsa pasi?’ 4 Kunyange kana ukagara pakakwirira* segondo,Kana kuti ukavaka dendere rako pakati penyeredzi,Ndinongokuburutsa kubva ikoko,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 5 “Kudai mbavha dzaizouya kwauri, iwo makororo anouya usiku,(Waizoparadzwa wosara usisina chinhu!)* Dzaisazongoba zvadzinoda chete here? Kana kuti kudai waizovingwa nevanhu vanotanha mazambiringa,Vaisazosiya mamwe kuti azonhongwa here?+ 6 Isau aongororwa kwazvo! Pfuma yake yakavanzwa yatsvagwa yese! 7 Vaenda newe vakakusiyira kumuganhu. Vese vawakabatana navo* vakunyengedza. Varume vawaiva nerugare navo vakukunda. Vaya vaunodya navo chingwa vachakuteya nemambure,Asi hauzozvizivi. 8 Zuva iroro,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha,“Handizoparadzi vakachenjera muEdhomu here+Kana vaya vane ungwaru munyika ine makomo yaIsau? 9 Varwi vako vane simba vachavhundutswa,+ iwe Temani,+Nekuti munhu wese ari munyika ine makomo yaIsau achaparadzwa.+ 10 Uchanyara kusvika pekupedzisira+Nekuti wakarwisa munin’ina wako Jakobho,+Uye uchaparadzwa.+ 11 Pazuva rawakamira parutivi wakatarisa,Pazuva rakatapwa uto rake nevatorwa,+Vanhu vekune imwe nyika pavakapinda pagedhi rake, vachibva vakanda mijenya+ pamusoro peJerusarema,Iwe wakatevedzerawo zvavaiita. 12 Haufaniri kufarira dambudziko remunin’ina wako,+Haufaniri kufarira kuparara kwevanhu veJudha,+Uye haufaniri kutaura mashoko ekuzvikudza pazuva rekutambudzika kwavo. 13 Haufaniri kupinda pagedhi revanhu vangu pazuva ravanowirwa nenjodzi,+Haufaniri kufarira dambudziko rake,Uye haufaniri kutora pfuma yake pazuva raanowirwa nenjodzi.+ 14 Haufaniri kumira pamharadzano dzenzira kuti uuraye vanhu vake vanenge vachitiza,+Uye pazuva redambudziko rake haufaniri kutora vanenge vapona uchivaisa mumaoko emuvengi.+ 15 Nekuti zuva raJehovha rekurwisa marudzi ese rava pedyo.+ Zvawakaitira vamwe ndizvo zvauchaitirwawo.+ Mabatiro awakaita vamwe ndiwo mabatirwo auchaitwa. 16 Marudzi ese acharamba achinwa wainiSemanwiro amakaita muri mugomo rangu dzvene.+ Achainwa oipedza yese,Uye zvichaita sekuti haana kumbobvira avapo. 17 Asi muGomo reZiyoni ndimo muchava nevachapukunyuka,+Uye richava dzvene;+Uye imba yaJakobho ichatora zvinhu zvayo.+ 18 Imba yaJakobho ichava moto,Imba yaJosefa ichava rimi remoto,Uye imba yaIsau ichaita semashanga;Vachavapisa vovaparadza,Uye muimba yaIsau hamuzovi neanopona,+Nekuti Jehovha pachake ataura. 19 Vachatora Negebhu nenyika ine makomo yaIsau,+NeShefera, nenyika yevaFiristiya.+ Vachatora nyika yaEfremu nenyika yeSamariya,+Uye Bhenjamini achatora Giriyedhi. 20 Nhapwa dzemurusvingo urwu runodzivirira,+Ivo vaIsraeri, dzichatora nyika yese yevaKenani kusvika kuZarefati.+ Uye nhapwa dzekuJerusarema, dzaiva muSefaradhi, dzichatora maguta ekuNegebhu.+ 21 Vaponesi vachakwira muGomo reZiyoniKuti vatonge nyika ine makomo yaIsau,+Uye umambo huchava hwaJehovha.”+
^ Kureva kuti “Mushumiri waJehovha.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “ukabhururuka uri mudengadenga.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Dzaizoparadza zvakawanda sei?”
^ Kana kuti “vawakaita sungano navo.”